Drive တွေ ဖြောက်ထားမယ် .... - keywords HERE
Home » registry » Drive တွေ ဖြောက်ထားမယ် ....
Drive တွေ ဖြောက်ထားမယ် ....
Registry အတွက် တတိယ မြောက် ပို့စ် ပါ .. ။ My Computer ထဲမှာ ရှိတဲ့ Drive တွေကို ဖြောက်ထားကြည့်ရအောင် .. ။ ဒါတွေက သိပြီးသား တွေဆိုရင်လည်း သီးခံပေးပါ .. ။ ကျနော် window အမျိုးမျိုး တင်သုံးကြည့်ပါတယ် .. ။ အခု နောက်ဆုံး Vista Service Pack 1 အထိပေါ့ .. ။ Floppy Drive က (A) အဖြစ်နဲ့ အမြဲတမ်းပေါ်နေပါတယ် . ။ ကျနော့် မှာ floppy drive လုံးဝ တပ်မထားပါဘူး .. ။ အသုံးလဲ မလိုပဲနဲ့ သူ့ကို သွားသွားနိုပ်မိရင် အချိန်ပိုကြာလို့ ဒီနည်းနဲ့ ဖြောက်ထားနိုင်ပါတယ် . .။ တစ်ခြား drive အားလုံးကိုလည်း ဖြောက်ထားလို့ ရပါတယ် .. ။
Run ကို သွား regedit လို့ရေး .. ။ Registry Editor ပေါ်လာရင် အောက်ပါ DTree အတိုင်း သွားပါ .. ။ HKEY_CURRENT_USER\_Software\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Policies\_Explorer
ကို သွားပါ ....။ Explorer ကို click လုပ်လိုက်ပါ .. ။ တစ်ချို့ window များမှာ NoDrive TypeAutoRun ဆိုတာ ပါပါတယ် ..။ အဲဒါကို click တစ်ချက်လုပ် Delete နိုပ်ပြီး ဖြတ်ပစ်လိုက်ပါ ..။ ပြီးရင် R-Click လုပ် New - DWORD Value ကို ရွေးပေးပါ .. ။
NoDrives လို့ နာမည်ပေးလိုက်ပါ..။
အဲဒါလေးကို D-Click ပေးပြီး ပေါ်လာတဲ့ Box မှာ Decimal ကို check ပေးပြီး 1 လို့ ပေး လိုက်ပါ .. ။ registry ကိုပိတ်ပြီး အရင်ပြောခဲ့တဲ့ နည်းနဲ့ re-initialize လုပ်လိုက်ရင် (A) ဆိုတဲ့ Floppy Drive ပျောက်သွားမှာပါ .. ။ Drive A မို့လို့ 1 ထည့်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခြား Drive တွေ ပျောက်ဖို့ အတွက်က A - Z ထိ တန်ဖိုးတွေရှိပါတယ် .. ။ ဒီလိုပါ ..။
ဖြစ်ပါတယ် .. ။ Drive နှစ်ခု ဖြောက်ချင်တာဆိုရင် နှစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကို ပေါင်းပြီး ထည့်ပေးလိုက်ပေါ့ .. ။ (ဥပမာ .. A နဲ့ F ကို ဖျောက်ချင်တာ ဆိုရင် A= 1 , F=32 ဖြစ်တဲ့ အတွက် 33 လို့ ထည့် ပေးလိုက်ရင် A နဲ့ F ဆိုတဲ့ Drive နှစ်ခု ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ် ..။)
ပျောက်နေတယ်ဆိုပေမယ့် မရှိတော့ တာ မဟုတ်ပါဘူး . ။ F ဆိုတဲ့ Drive ကို My Computer မှာရော Address bar မှာပါ တွေ့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး .. ။ ပေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Run မှာ F:\_\_ လို့ ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ .. ။ F drive open ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် .. ။
( Decimal ကို check လုပ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့ )
ulh May 23, 2013 at 4:41 AM
ကျွှန်တော့မှာwindow-7အတွက် audio software မရှိလို့ကူညီပါအုံး
ကျွှန်တော် motherboard က AsrockG31M-Sပါ တင်ထားတာကwindow7 64bitပါ
AsrockG31M-S.com မှာရှိတဲ့ Audiosoftwareကို ဒေါင်းလုပ်ပြီး အင်စတောလုပ်ပြီးပါပြီ
ဒါပေမဲမရဘူး ကျွှန်တော့ email.ကတော့ ulhmnc@gmail.comပါ